Kazakhstan: Mihatanora sy Mihamanjombona Ireo Avara-pianarana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Avrily 2018 20:29 GMT
Tsy dia vokatry ny adihevitra ara-pôlitika misokatra loatra ny famadibadihana ireo avara-pianarana sy ireo manampahefana ambony ao Kazakhstan. Manome tany lonaka ahafahan'ireo mpitsikera sy mpandinika mandalina ny antony ambadiky ny famadihana izato na izatsy ireo fialàna sy fametrahan'olona tsimoramora. Kanefa, misy hevitra iraisana dia ny fahitàna fa mihatanora hatrany ireo avara-pianarana tato anatin'ny taona vitsy lasa izay, satra miala tsikelikely ny “mpiambina tranainy” ireo lehiben'ny Antoko Kaominista Sôvietika.
Vao haingana izay no nametrahan'ny filoham-pirenena Kazakh an'i Kairat Kelimbetov, mpahay toekarena teknôkraty 39 taona, nobeazina tany Moskoa, ho lohan'ny fiadidian'ny filoha. Nahita fahombiazana tanatin'ny asam-panjakana izy, niainga tamin'ny mpiasam-panjakana tsotra tao amin'ny sampana mpamolavola drafitra tao anatin'ny Minisiteran'ny Toekarena ka tonga hatreo an-tampon'ny minisitera misy azy. Teo amin'ny lohan'ny “Kazyna”, Tahirimbolam-panjakana ho an'ny Fampandrosoana Maharitra, izy tamin'ny taon-dasa ary lasa lefitry ny filoha tao anatin'ny antokon'ny filoha, “Nur-Otan”.
Ampahatsiahivin'i Adam Kesher fa fito taona lasa izay, anisan'ireo nanangana ny hetsika Safidy Demôkratikan'i Kazakhstan i Kelimbetov (izay nangataka ny fanavaozana demôkratika ary niharan'ny fanenjehana mafy nataon'ireo manampahefana), marihiny ihany koa ireo antony nahatonga ny fisondrotan-toerana tahaka izao:
“Toerana ambony ny asan'ny lohan'ny fiadidian'ny filoha – ary iray amin'ireo mitana fahefana lehibe indrindra eo amin'ny firenena. Raha toa ka miezaka mamantatra ny antony ambadik'io fanendrena io ireo manampahaizana (dia ny fanomezan-danja ny toekarena anatin'ny pôlitikam-panjakana sy ny asa fiatrehana ny krizin'ny findramam-bola, na fanavaozana ireo avara-pianarana), zavatra iray no azo antoka hatreto — azo atao tsara ny mahomby anatin'ny asam-panjakana. Angamba, ity no hafatra lehibe alefan'io famadibadihan-toerana hoentina manohitra ny ady vaovao amin'ny kolikoly, nambaran'ny antoko mpitantana”.
Miombon-kevitra i Nemtschin fa mazava ny hevitry ny fanavaozana ny avara-pianarana – hitondra fomba fijery vaovao ny vahoaka tanora sy mivoatra tsy manana “lasa manjomboka fony vanimpotoana Sovietika” izay misolo tena ny “taranaka vaovao”. “Saingy, misy ny fitsimbadihan'ny meday”, hoy izy, midika fa mety tsy ampy traikefa ireo tanora. Olana iray hafa hitany tao amin'ny iray amin'ireo fihaonambe iraisan'ny minisitera ny tsy fahatraran'ireo tanora toerana ambony matetika raha tsy maneho fahatokiana tsy misy fepetra ny filoha sy ny fitondrana amin'ny ankapobeny. Ho fanampin'izay, maro amin'izy ireo no zatra maka tombontsoa amboniny amin'ny toerany:
“Ny zavatra tsikaritro taorian'ny nitsidihako io minisitera io? Zavatra mahazatra tahaka ny – famataranandro Soisa, fifandraisan-tànana marobe, resaka sy fifamoivoizana manerana ny efitrano, rehefa mamaly antso an-taribihy izy ireo dia mangataka ny hamerenana ny antso afaka herinandro. Ny zavatra lehibe indrindra – fankatoavana miafina ny deba [ru]”.
Mandritra izay fotoana izay, nanana asa goavambe ihany koa noho ny rohim-pihavanany akaiky tamin'ny fianakavian'ny filoha, ny tanora iray sady mihetsiketsika – na tokony antsointsika hoe fanta-daza- dia i Rakhat Aliyev, mpikambana taloha tao anatin'ny avara-pianarana. Ary ny fanapahankevitra feno finiavan'ny filoha no nahafaka ny barakan'ity vady taloha an'ny vavimatoan'i Nazarbayev ity, voampanga ho lehibenà andian-jiolahy sy naka lehilahy roa an-keriny. Voaheloka higadra 20 taona izy vao haingana noho ny tsy fanatrehany ny fitsaràna azy, kanefa mbola tsy tratran'ilay Themis Kazakh. Tsara fipetraka any Vienne (Aotrisy) ary nanokatra vohikala i Aliyev – izay mitono-tena ho mpanakiana an'i Nazarbayev ankehitriny. “Tonga dia voasakana tao Kazakhstan izany”, hoy [ru] i mantrovkz.